रुकुम का´ण्ड : भागेर बा’चेका नवराजको साथिको ब ‘यान ( भिडियो सहित ) – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/रुकुम का´ण्ड : भागेर बा’चेका नवराजको साथिको ब ‘यान ( भिडियो सहित )
रुकुम का´ण्ड : भागेर बा’चेका नवराजको साथिको ब ‘यान ( भिडियो सहित )
लगातार तिन बर्षदेखिको प्रेमलाई बिबाहमा परिणत गर्ने लक्ष्यका साथ जाजरकोटको भेरी नगरपालिका -४ रानागाउ का २१ बर्षिय नबराज बि क र पच्चिमरुकुमको चौरजहारी नगरपालिका -८ सोतीकी १७ बर्षिय एक ठकुरी जात भएको युवती संग प्रेम मा डुबेका उनीहरु समाज को केहि डर नमानी बिहे गर्ने अवस्थामा पुग्छन l बिहेको लागि नबराज आफ्ना साथि हरुलाई जन्ती को रुपमा लागेका थिए l
कसरी बाच्नुभयो तपाईं यो घटनाबाट तपाइमो अन्य तिनजना साथिको शव भेटियो अझै तीन जना बेपत्ता हुनुहुन्छ । तपाईं कसरी बाच्न सफल हुनुभयो ? म भेरि नदिमा आफ्नो शरिरको कम्मर जति आउने पानी भयको ठाउमा पुगेको थिय । मलाइ मान्छेहरुले तानेर बाहिर ल्याए । तपाईं के कामले केटिको घर जानुभयको थियो ? केटि सङ्ग बेहुलाको के कुरा भयो त्यो हामिलाइ थाहा भयन । हामिलाइ बेहुलाले बेहुली लिन जानी हो भन्यो त्यही भयर गयको हो ।
त्यहा पुगिसके पछि तपाइहरुलाई गाउले हरु लखेट्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? बेहुलिको घर हामिलाइ थाहा भयन रोडको माथी रहेछ बेहुलिको आमाले हाम्रो १९ जनाको टोलि देख्ने बित्तिकै अस्तिको चौकिले पुगेन आज त नमारी छोड्दिन भने । हामिले बेहुलालाइ सोध्यौ कि यो बेहुलिको आमा हुन ? अनि बेहुलाले अ भन्यो ।हामिले केही बोलेनौ हामी रोड रोडै गयौ ।
त्यसपछी के भयो ? रोड बाट जाँदै थियौ माथी बाय ढुङ्गा प्रहार भयो । मान्छेहरु धेरै आय ? उनिहरुले तपाइहरुलाइ के देखेर ढुङ्गा हाने खेदे ? के हुनु अचानक रोक रोक भन्दै ढुङ्गा प्रहार गरे ।पूरा भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
साउन २० गतेदेखि ३२ गतेसम्म शिक्षकलाई होम क्वारेन्टिन राखिने
५ महिनापछि खुल्यो नियमित अन्तराष्ट्रिय उडान